IVilla yeMbali yaBucala: Isitiya esiLush, iPool, iCo-Work
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguBernardo
Qhagamshelana kwakhona nendalo kunye nabahlobo bakho kunye nosapho kwindawo ye-oasis egcwele iindawo ezivulekileyo kwaye ijikelezwe yindalo. I-Villa yinxalenye yembali yaseHacienda Santa Cruz, edibanisa imbali kunye nemibono yeenkulungwane ezidlulileyo kunye neemveliso zanamhlanje. Amava akhethekileyo akho kunye nabahlobo bakho kunye nosapho, apho yonke indlu yeyakho. Thatha idiphu ehlaziyayo echibini okanye uphumle kwi-sunbeds, emva koko wonwabe ebusuku kwibhari kunye negumbi lomdlalo okanye ulungelelaniswe kwindawo yokusebenzela.
I-Villa, ethatyathwe kwicathedral yexesha leColony, ineeholo ezinkulu ezintathu ezivulekileyo eziqhagamshela kwiveranda engaphambili, ikhitshi, amagumbi amathandathu kunye negadi. Xa ungena, uya kubuliswa lithafa elikwiveranda engaphambili elungele isidlo sakusasa kwaye ujonge yonke i-hacienda. Xa ungaphakathi, uya kufumana indawo yebha yokuxuba izinto kunye neqela lakho, itafile enkulu yesidlo sangokuhlwa iindwendwe ezili-10 ukuya kwezili-14, kunye negumbi lomdlalo elixubeneyo / indawo yokusebenzela ene-Wi-Fi enesantya esiphezulu elungele ukonwaba. kunye nokugxila kuxhomekeke kwiimfuno zakho.
Qhubeka uphonononga, kwaye uya kuphumela kwigadi yabucala, ezaliswe zizityalo kunye nezandi zendalo. Apha, unokuzilibala iingxaki zakho, uchitha intsasa okanye emva kwemini unebarbecue kwitafile yesidlo sangokuhlwa sangaphandle, ukusukwa kwigumbi lokuphumla okanye ukuya kuqubha echibini elikhulu. Igadi inezibane kunye nesokethi zombane, ngoko ungaqhubeka ukuyonwabela nangaliphi na iyure.
Ikhitshi yobuchwephesha kunye nabasebenzi bokucoca bafumaneka ukusuka kwi-9 ukuya kwi-6 kwaye bakulungele ukukhathalela iimfuno zakho, ukubeka phambili ucoceko kunye nentlonipho kula maxesha anzima. Banobubele kwaye banetalente kwaye bakulungele ukulungiselela isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho. Baza kuqinisekisa ukuba amagumbi akho acocekile kwaye enziwa yonke imihla, ukuze ungabi naxhala malunga nemisebenzi yasekhaya ngexesha lokuhlala kwakho.
Sinofikelelo kumongikazi okwisiza ukuba sicelwe kwangethuba kwaye isibhedlele sasekhaya asikude kangako ne-hacienda.
He manejado este negocio familiar de hospitalidad por una década. Hemos recibido conferencias, campamentos de verano, huéspedes individuales y grupos de boda. Siempre me puedes preguntar lo que sea